Wasiirka Maaliyada Iyo Horumarinta Dhaqaalaha DDSI oo Kawaramay Jihooyinka U Yaala Xafiiska. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Sabti.18.Oct.2014,Wasiirka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane Axmed Cabdi Sheikh Maxamed oo maanta waraysi gaar ah siiyay shabakada wararka ee cakaaraNews, ayaa ka warbixiyay habraacyada meelmarinta xoojintga iyo dardargalinta guud ahaanba qorshayasha horumarineed ee uyaala xafiiska. Maadaamo oo ay xukuumadu sanadihii ugu danbaysay si dhaqso ah uga midho dhalisay dhamaanba qorhsayasha horumarineed ee yaala.
Haddaba wariyaha shabakada wararka ee CakaaraNews ayaa ugu horayntii waydiiyay bal in uu wasiirku ka warbixiyo taariikh nololeedkiisa iyo shaqooyinka uu soo qabtay deegaanka. Taariikh nololeedka wasiirka oo dheerayd balse lasoo koobay waxay u dhignayd sidan.
Wasiirka Axmed Cabdi Sheikh Maxamed waxa uu ku dhashay gobolka Nobob gaar ahaan Degmada Garbo. Taariikhdu markay ahayd 1986 tariikhda yurubta wuxuuna dugsigii hoose ku dhamays’tirtay isla degmada garbo 1998, wuxuuna ahmed ka mid ahaa ardaydii ay dawladu u dirtay wabarasho dugsiga ee magaciisa la odhan jiray ediget adult boarding school ee ku yaalay xarunta dalka ee Adiis ababa. Halkaasi oo uu ku dhamays tirtay waxbarashadii dugsiga dhexe illaa sare. Isaga oo ahmed markii uu dugsiga dhiganayay ahaa gudoomiyaha ardayda soomalida. Ee waxa ka baran jirtay collagekasi islamarkaana ahaa xubin aad ugu fir firkoon dhinaca baxbarasha iyo dhinaca xidhiidhka bulshada markastana utaagnaa isku xidhka qoomiyadaha walaalaha ah, ee waxka baran jiray dugsiga ediget. Ka dib markuu uu dhamaystay waxbarashada dugsiga sare waxa uu noqday ardaydii lagu soo qoray jaamacada diredawa. Taasi oo uu galay faculty of business and economic (depart of accounting and finance) jaacamadaasi oo uu ka soo qaatay B.A, Degree intii uu jaamacada dhiganayay ahmed waxa uu ahaan jiray gudoomiyaha ardayda jaamacada waxkabaran jirtay. Isaga oo hadda wada waxbarashad mastar of business management
Markii uu soo dhamaystay waxbarashadiisa ahmed waxa uu xilal ka soo qaybtay xafiisyo kala duwan isaga oo shaqadiisa ugu horaysay ka soo qaybtay maamulka magaalad Goday ahaana gadhwadeenka geedi socodka xad ururinta iyo dabagalka maamulka magaalada goday. Waxaa kale oo uu noqday madaxa wakaalada dakhliga ee maamulka magaalad Goday . sidoo kale waxa uu noqday madaxa wakaalada dakhliga ee maamulka magaalada Jigjiga . sidoo kale waxa loo dalacsiiyay maayorka magaalada qabrihadar. Waxaa kale oo uu noqday wasiir ku xigeenka wakaalada dakhliga ee DDSI mudooyinkii uu soo hayay shaqooyinkaasina waxa uu muujiyay firfircooni iyo dadaal dheeriya isaga oo abaalmarino kala duwan lagu siiyay shaqooyinkaasi uu hore u soo hayn jiray. Iyada oo hadda loo magacaabay wasiirka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI.
Haddaba waxaa kale oo uu wasiirka ka warbixiyay dar dargalinta iyo dadaalka xoogan ee uu ugu jiro ka midho galinta qorshayaasha horumarineed ee uu yaala gaar ahaan meelmarinta jihooyinka hayaanka geedi socodka dhinaca shuruucaha maaliyadeed ee sand miisaaniyeedka 2007. Isaga oo sheegay wasiirku in ay hadda dhamaan gobolada iyo degmooyinkaba ay ku maqan yihiin tiimam kuwaasi oo ka shaqaynaya barnaamijka cadcadaanta iyo islaxisaabtan miisaaniyadeed(Financial Transparency & Accountability (FTA).
Waxaa kale oo uu wasiirku carabka ku dhuftay in mudada yar ee uu joogta xafiiska ka dhaqaa jiray shaqooyin badan oo wakhtihii hore sida qaadashada iyo shaqaalaysiinta cudud shaqaale oo laga shaqa galiyay xafiiska maaliyada ee heer deegaan iyo kuwa degmooyinkaba. Waxaa kale oo xussid mudan in ay xiligaa aan tagnay xafiiska dhexdiisa ka socoday shaqo xoog leh oo ah dhinaca nadaafada iyo kor u qaadida bilicda xafiiska iyada oo wadooyinka soo gala xafiska la dhigayay dhagaxa qoran ee loo yaqaano cobblestone ka.